Home Wararka AL Shabaab oo xalay la wareegay deegaanka Marin Gubaaye ee G. Shabeellada...
AL Shabaab oo xalay la wareegay deegaanka Marin Gubaaye ee G. Shabeellada Hoose
Ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la wareegay deegaanka Marin Gubaaye ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo ay hore ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan AMISOM.
Wararka ka imaanaya degaankaas ayaa intaas ku daraya in ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in ciidamadooda ka socda Uganda ay isaga baxeen saldhigga deegaanka Marin Gubaay ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxay sheegtay in sababta ay uga baxeen ay tahay aag beddelasho ciidan. Saldhigan ayaan u jira 40km magaalada Baraawe, oo katirsa gobolka Shabeelada Hoose. Ururka Al Shabaab ayaa labadii bilood ee u danbeeysay ku guulaystay in ay dib u qabsadaan dhul ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada ay horay u heeysteen.